မနာလို တာ လား …. ကြောက် နေ တာ လား ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မနာလို တာ လား …. ကြောက် နေ တာ လား ?
မနာလို တာ လား …. ကြောက် နေ တာ လား ?
Posted by The Reds on Dec 24, 2010 in Myanma News, News | 11 comments
blood hospital NLD
လွန် ခဲ. တဲ. ၃ ရက် လောက် .. ဒီ ဇင် ဘာ ၂၁ ရက် နေ. က ပေါ့ ဗျာ .. NLD လူ ငယ် များ မွန် မြတ် လှ တဲ. သွေး အ လှူ ပြု လုပ် ခဲ. ကြ ပါ တယ် ..ဒါ တော. လူ တိုင်း သိ ကြ မယ် လို ထင် ပါ တယ် ။ အဲ ဒါ ကို မ နာ လို ဖြစ် တာ လား ကြောက် တာ လား တော. မ သိ ၀ူး အ ခု NLD လူ ငယ် တွေ သွေး လှူ ခဲ. တဲ. အ မှတ် ( ၂ ) စစ် ဆေး ရုံ ကြီး ရဲ. အ ၀င် ပေါက် မှန် သ မျှ ကို ပိတ် ပြီး ၁ ပေါက် တာ ဖွင်. တော. ကြောင်း သိ ရ ပါ တယ် .. ယခု ၀င် ပေါက် တွင် လည်း တင်း ကြပ် စွာ စစ် ဆေး နေ ကြောင်း သိ ရ ပါ တယ် ။ ယ ခု ကဲ. သို. ဖြစ် ခဲ. ကြ ခြင်း ကြောင်. ဆေး ရုံ တွင်း သက် ဆိုင် ရာ များ ယောက် ယက် ခဲ. ပါ သေး တယ် … အ ဘယ် ကြောင်. ဆို သော် ဥာဏ် ကောင်း လှ သော လူ ငယ် များ သည် ဆေး ရုံ တွင်း သို. အ ဖွဲ. လိုက် မ ၀င် ခဲ. ဘဲ ၀င် ပေါက် ၁ ပေါက် ကို ၅ ယောက် လောက် ခွဲ ၀င် ခဲ. တယ် … လှူ ပြီး တ ၀က် လောက် ယောက် မှ NLD လူ ငယ် များ ဖြစ် နေကြောင်း သိ ရ လို. သက် ဆိုင် ရာ များ က မ သိ ချင် ယောင် ဆောင် နေ ခဲ. ရ ပါ တယ် .. ဒါ ပေမဲ. ကံ မ ကောင်း စွာ ဘဲ ည နေ BBC သ တင်း က သွေး လှူ တမ်း ခဲ. တဲ.အ ကြောင်း ကြေ ငြာ ခဲ. တဲ. အ တွက် အ ထက် က ဒေါ ပွ နေ ကြောင်း လည်း သိ ခဲ. ရ ပါ တယ် ။ မေ စု မွေး နေ. မှာ ယခု လို မွန် မြတ် လှ တဲ. သွေး လှူ တမ်း တာ အ ရမ်း ကို လေး စား ဖို. ကောင်း ပါ တယ် .. အဲ ကြား ထဲ မှာ မ နာ လို တဲ. သူ တွေ ကြောက် တဲ. သူ တွေ က တော. အ လုပ် တွေ ရှုပ် နေ ရ ပါ တယ် ဗျာ ။
သွေးလှူတာကို အကြောင်းပြပြီး စုရုံးစုရုံးကနေ
သူမမွေးနေ့ မှာ လူငယ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိလာရင် အထင်ကရဖြစ်လာနိုင်တယ်
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက သွေးတွေကို ပြည့်သူ့ ဆေးရုံမှာ ရည်ရွယ်ချက်တွေတွက်
ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ပြီး ဝင်လှူကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့ လေးစားမိပါတယ်
တစ်ခုခုသော ဝဘ်ဆိုက်ကို ဆုံရပ်လုပ်ပြီး
ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန်မှာ အားလုံး ကိုယ့်အိမ်ေ၇ှ့ တွေလောက်မှာ ထွက်ရပ်ပြီး
သူ့ ငါကြည့် ငါ့သူကြည့် အူကြောင်ကြောင်လုပ်ကြည့်ပေါ့ဗျ
လူတွေအများကြီး လမ်းပေါ်ထွက်ဘို့ လေ ဘယ်သူမှခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူး
ခေါင်းဆောင်လည်းမလုပ်နဲ့လုပ်ရင် ခံရမယ်လေ
လူတွေအရမ်းများလာလို့ ရှိရင်တစ်ခုခုတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ ကိုယ်ရပ်တာဘဲ
အဲ့သည်နောက်မှာမှ အခြေနေကြည့်ပြီး …
အဟီး ရီစရာဖြစ်သွားလား ဒါအကြံအကုန်ဘဲ
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်တို့ အားလုံး (တစ်ယောက်မကျန် ) လမ်းမပေါ်ရောက်ရင်တော့ ဖြစ်ပြီထင်တယ် ကျန်လို့ တော့မရဘူးနော်
နောက်တစ်ခုက လမ်းမပေါ်က လူတွေကို ခွေးသတောင်းစားတွေ နှိပ်စက်တာကို
ဗွီဒီယိုတွေရိုက် ထားတာကို အရသာခံပြီးကြည့်ခြင်တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက
ခွေးမသားတွေ ခွေးမသမီးတွေလို့အခုထဲက ကြိုတင်ပြီးဆဲထားတယ်နော်။
သူများ သက်စွန့် ကြိုးပမ်းလုပ်နေကြတာကို အရသာခံပြီးကြည့်ချင်တဲ့
ကို မိုက် ကယ် … အဲ အ ကြံ လည်း လူ တိုင်း လုပ် နိုင် ဖို. ဆို တာ မ ဖြစ် နိုင် ၀ူး ဗျာ … ပြီ ရင်း လေ အ စိုး ရ ကို ခွေးသူ တောင်း စား တွေ လို. မ ပြော ပါ နဲ. ဗျာ … ခွေး တွေ သိက် ခါ ကျ နေ ပါ အုးံ မယ် ။
အံ့ပါ့ အံ့ပါ့ .. မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လုပ်ရတာ ဒီတစ်နိုင်ငံထဲရှိမယ်ထင်တယ် ….
ဘာပဲပြောပြောသွေးလှူတယ်ဆိုတာ မွန်မြတ်တဲ့အလှူဒါန တစ်ခုပါ။
တို့ NLD Youth တွေ၊ Mission တစ်ခုလုပ်ရမယ်..
ကိုယ့်ရဲ့ Objective က အန်တီစု မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရဖြစ်အောင် သွေးလှူဖို့…
ဆေးရုံတွေကလဲ တို့အဖွဲ့တွေမှန်းသိရင် အလှူကို လက်ခံချင်မှ လက်ခံမယ်…
ဒီတော့ Mission Accomplish ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်ရင် ကိုယ့်သွေးကို အလှူခံရနိုင်မယ် ဆိုတာ တိုင်ပင်ခြင်းဖြစ်တယ်…
Group A က ဒီကို ချီတက်၊ Group B က ဒီလို ကွေ့ဝင်၊ Camera တွေ Watcher တွေကို ဒီလိုရှောင်…
ပြီးရင် ဒီကနေ ပြန်ထွက်… ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် မှ Fail မဖြစ်စေနဲ့….
ဒါကအထူး Blood Donation Operation နော်….
သွေးတွေသာလှူပေးရတာပါ လိုအပ်လာရင်တစ်ခါမှလဲ အလကားမရဘူး လိုတဲ့လူနဲ့ လှူတဲ့လူ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ ရင်တော့ကောင်းမှာပဲ
ဟုတ် တယ် ဗျာ အဲ အ ကြံ က မ ဆိုး ၀ူး …. ဒါ ပေ မဲ. အဲ လို တွေ. ဘို. အ ချိန် က စကား ပြော နေ တယ် ဗျာ ။
ဟီးဟီး … အလှူလုပ်တာကိုတောင် အလကားနေရင်း ကြောက်နေတဲ့ဟာတွေက ရှိသေးတယ် ..။ ရယ်တော့ရယ်ရတယ် … သူတို့ရဲ့ ဘောင်က တဖြည်းဖြည်းကျဉ်းလာတာ အခုမှသတိထားမိတယ် ထင်ပါရဲ့ ။
NLD လူငယ်တို့ရေ အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခုပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ .. အာပေးတယ်ဗျို့ … မွန်မြတ်တဲ့အလှူအတွက်လည်း သာဓုခေါ်ပါတယ် ။
Kyaukme Group သို့
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျားတို့တစ်ဖွဲ့ လုံး သောက်မြင်ကပ်ပြီးထုတ်ခံထားရတဲ့ လူရှုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့။
ခင်ဗျားတို့ကိုပြောမယ်။ ကျွန်တော်က မခံနိုင်လို့ဝင်ရေးပေးရတာပါ။ ဒီကိစ္စမှာ ရဲလင်းက ကျွန်တော့် ကို အဖွဲ့ထဲထည့်ပေးတယ်။ အစကတော့ ရိုးရိုးသားသားရေးမလို့ဘဲ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့က အုပ်လိုက်ကြီး ၀ိုင်းဆဲနေတယ်။ ထင်ရာစိုင်းကိုလေ ။ သူက ကျွန်တော်သူငယ်ချင်း
အဲဒီမှာ မိုးသံချို ရဲ့အကောင့်ကို သူ ဟက်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကောင်မဟက်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော် ဟက်လိုက်တာ။ ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကို ထုတ်ထားတယ်လေ။ မှတ်မိလား။ ခင်ဗျားတို့ရိုင်းလို့ပါ။
အခု ခင်ဗျားတို့ဆရာတင်ထားတဲ့ တွတ်ပီလား ဗိုက်ကလေးလား အေးအဲဒီကောင် ကိုတောင်းပန်ခိုင်းလိုက်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ wall ပေါ်မှာ ကျွန်တော် မောင်လူရှုပ်ကို ခင်ဗျားတို့ပြန်တောင်းပန်တာနဲ့ မိုးသံချိုကို အကောင့်ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ဆောရီးပဲ။
ထပ်ပြောပြအုံးမယ်။ ထင်ရာစိုင်းဆိုတာ ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။ သူ့ကို တစ်ခုခု မဟုတ်တာလုပ်တာတွေ့တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Group က အမြဲတမ်းဆော်ဖို့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ဒါပဲ
မောင်စိုင်း မင်းကိုတော့ ဆောရီးပါ။
သင့်ပြုသောကံ ပဲ့တင်သံ သင့်ထံပြန်လာမည်။
လှူလိုက်တဲ့သွေးစေတနာ၇ှင်တွေကအဲ့လောက်များနေပြီး…တကယ်ဆေးရုံသွားလို့ သွေးလိုနေပြီဆို…၀ယ်ရတာနဲ့..မ၇ှိတာနဲ့ …ဘယ်နားေ၇ာက်ကုန်ပြီလဲမသိဘူး…